'अहिले एनआरएनए टाट पल्टिएको अवस्थामा छ' | Citizen Post News
विदेशमा बस्ने सबै ८० लाख नेपाली एनआरएन होइनन् । अनुमानित तथ्याङ्कलाई मान्ने हो भने अहिले ८० लाख जति मानिस विदेशमा बस्ने अनुमान गरिन्छ । तर, एनआरएनएको विधानले दुई वर्षभन्दा बढी सार्क राष्ट्रबाहेकका मुलुकमा पढाई, व्यवसाय लगायतका कामले वसोबास गर्ने जो कोही नेपालीलाई पनि एनआरएन भनेर परिभाषित गरेको छ । यो परिभाषालाई मान्ने हो भने करिब ५० लाख जति नेपालीलाई एनआरएन भन्न सकिएला ।
के ५० लाख नेपाली सबै एनआरएन हुन् त ? अवश्य पनि होइनन् । परिभाषाले बाँध्न खोजे पनि करिब ८२ देशमा फैलिएको एनआरएनएको सञ्जालमा लगभग ७२ हजारले मात्रै सदस्यता लिएका छन् । अनि के ती सबै ७२ हजार नेपालीले एनआरएनएको सदस्य बन्छु भनेर आफैले सदस्यता लिएका हुन् त ? त्यो पनि होइन । तीमध्ये पनि कतिलाई पार्टीको गुटबन्दीमा परेर, कतिलाई अरूले पैसा हालिदिएर चुनावका बेलामा भोट पाउने आशामा सदस्यता बनाइएको हुन्छ । त्यसैले एनआरएनएको अहिलेको आधिकारिक सदस्यता सङ्ख्या लगभग ७२ हजार मात्रै हो ।
ती ७२ हजार (७२ हजार २ सय ७५) मध्ये पनि धेरै दर्ता भएका एनआरएनएका सदस्यहरू क्रमशः बेलायतबाट १३ हजार ६ सय २९, अस्ट्रेलियाबाट ११ हजार ६ सय ३८ र अमेरिकाबाट ९ हजार ८९ गरेर अग्र तीन स्थानमा रहेका छन् । यिनीहरूको जम्मा सदस्य सङ्ख्या ३४ हजार ३ सय ५६ हुन्छ । जुन जम्मा सदस्य सङ्ख्याको ४७.५ प्रतिशत हुन आउँछ । यसको अर्थ हो एनआरएनएमा यी देशहरूमा बस्ने नेपालीहरूको नै दबदबा रहेको छ ।
एनआरएनएमा राजनीतिकरण पहिलेदेखि नै हुँदै आएको हो । मात्र अहिले यसको मात्रा बढ्दैबढ्दै गएर छचल्किएको हो । अहिले यसमा राजनीतिकरण यति धेरै भयो कि अब त प्यानलवेगर र राजनैतिक पार्टीको साथ र समर्थनवेगर चुनाव लड्नेहरूले जित्ने अवस्था नै छैन् । यो अवस्था एनआरएनएको केन्द्रीय चुनावमा मात्रै होइन अमेरिका, अस्ट्रेलिया, बेलायत लगायतका देशहरूमा पनि उस्तै रूपमा व्याप्त छ । एउटा यस्तो समूह विदेशमा छ जसले विदेशमा गएर पनि नेपालको पार्टीको झण्डाको ओत लाग्नु आफ्नो अहोभाग्य ठान्दछ ।
त्यो समूहले नेपालका नेताहरूले कि त अन्तरक्रियाका नाममा या त छलफलका नाममा विदेश बोलाएर आफ्नो पार्टी र नेताहरूप्रति भक्तिभाव प्रस्तुत गर्दछ र तिनै नेताहरूको छत्रछायाँमा बस्न रुचाउँछ । हो, तिनै व्यक्तिहरूको चंगुलमा यो एनआरएनएको नेतृत्व विस्तारैविस्तारै बेरिंदै गइरहेको छ । यो नै यस संस्थाको शाख गिराउने एउटा प्रमुख विषको रूपमा रहँदै आएको छ । जबसम्म यो समूह सक्रिय रहन्छ, तबसम्म एनआरएनएलाई राजनीतिकरणबाट कसैले बचाउन सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।
यतिसम्म कि अब चुनाव लड्दा यसका प्रत्यासीहरू पार्टीका नेताको घरमा गएर वैठक बसेर क-कसलाई उठाउने र क-कसलाई नउठाउने भन्ने छलफल गर्छन् । डा. उपेन्द महतोले अधिवेशनमा राजनीतिकरण हावी भयो भन्दै बहिष्कार गर्नुलाई संस्था शुद्धिकरण र राजनीतिबाट मुक्त गर्ने दायित्वतर्फको एउटा बलियो दवाबचाहिँ मान्न सकिन्छ ।
एनआरएनएमा चुनाव लड्ने वा यसको नेतृत्व गर्नेहरू अधिकांश व्यापारीहरू नै छन् । उनीहरूले विदेशमा गएर एक हदसम्म पैसा कमाएर अब नाम पाइने आशामा यसको नेतृत्वमा पुग्ने आकाङ्क्षीहरू बन्छन् । अनि जहाँ पैसा ठूलो मानिन्छ, त्यहाँ इमान्दारिताभन्दा बढी जालझेल हुन्छ । अनि चुनाव जित्नका लागि अनेक तिकडम गरिन्छ, चलखेल गरिन्छ दाउपेच थापिन्छ र मतहरूको किनबेच गरिन्छ ।
एनआरएनएको चुनावमा यी सबै दाउपेच राम्रैसँग प्रयोग हुँदै आइरहेका छन् । पैसालाई सर्वोपरि मान्ने वर्गले लगानी र अर्थका बडाबडा कुरा गर्छन् । त्यसैले त विदेशमा दुःख पाएका वर्गको कुरा छायाँमा पर्छन् । पैसा खर्च नगर्ने तर ज्ञान र सीप भएकाहरू पाखा लाग्छन् । कतिलाई यो पैसाको फन्दाभन्दा टाढा बस्नु नै उचित लाग्छ भने धेरैलाई यो सञ्जालमा पुग्ने हैसियत नै हुँदैन ।
यसको नेतृत्वमा पुग्नका लागि कति पैसाको खोलो लगाउनु आवश्यक छ भन्ने कुरा नै यसप्रति सामान्य मानिसहरू विकर्षित हुनुपर्ने कारणहरू पर्याप्त देखिन्छन् । नेतृत्वले सामान्य विदेशिएका मानिसका समस्यालाई बुझ्न र समेट्न यो संस्थामार्फत् कहिल्यै पनि इमान्दार प्रयास गरेको देखिँदैन ।
जुन नेतृत्व प्राप्त गर्नका लागि अनेक दाउपेच, तिकडम र पैसाको लेनदेन गरिन्छ, त्यस संस्थाबाट खास धेरै आशा गर्नुपर्ने अवस्था मैले देख्दिनँ । अहिले एनआरएनए टाट पल्टिएको अवस्थामा छ । नयाँ नेतृत्वले १५ करोड ऋणभारसहित संस्थाको नेतृत्व प्राप्त गर्नेछ । यो किन कसरी भयो भन्ने विस्तारै खुल्दै जाला तर एउटा कुराचाहिँ अहिले के भन्न सकिन्छ भने यो संस्थाको नेतृत्वमा धेरै गुनासा र गम्भीर प्रश्नहरू ठडिएका छन् ।
अबको नेतृत्वले संस्थालाई पारदर्शी, जवाफदेही, सबै समुदायलाई समेट्न सक्ने र राजनीतिबाट पर राखेर मातृभूमिको सेवामा समर्पित गर्नुपर्ने ठूलो जिम्मेवारी आएको छ । त्यसको जवाफ विस्तारै समयले दिँदै जाला । अस्तु !